'Besizobingelelana nje' - kusho uMagashule ngemuva komhlangano wekhokhasi ye-ANC | News24
'Besizobingelelana nje' - kusho uMagashule ngemuva komhlangano wekhokhasi ye-ANC
Jan Gerber noPaul Herman
Cape Town – Njengoba kuqhubeka ukuhlawumbisela ngekusasa likaMengameli Jacob Zuma, i-ANC ithe umhlangano wekhokhasi yawo obubiziwe ngoLwesine ubungowokubingelelana.
Lokhu kushiwo nguNobhala Jikelele we-ANC u-Ace Magashule noSotswebhu wenhlangano uJackson Mthembu ngesikhathi bekhuluma nezintatheli ngaphandle kwePhalamende ngemuva kwalo mhlangano odonse amahora angaphezu kwamabili.
Lo mhlangano ubizwa nje vele abantu abaningi banemibuzo ngekusasa likaMengameli Zuma nokuthi izokwethulwa nini iState of the Nation Address (SONA) kulandela ukuhlehliswa kwayo.
OLUNYE UDABA: UMagashule walile ukusho ukuthi uzokwehla nini uZuma esikhundleni
UMthembu uthe ngokujwayelekile abakhulumi nabezindaba ngemuva komhlangano wekhokhasi ngenxa yokuthi uwudaba lwangaphakathi, kepha ngoba abezindaba batshengisa intshisekelo babone kukuhle ukuthi bashaye ngamafuphi.
"Bengize kulo mhlangano wekhokhasi ngoba ungowokuqala noMengameli Cyril [Ramaphosa]. Besizobingelelana namanye amaqabane nabaholi sibatshele ukuthi kumele basebenze kanzima ukuqinisekisa ukuthi izinqumo ezathathwa enkomfeni ye-ANC ziyaphumelela," kusho uMagashule.
"Sifuna ukucacisa ukuthi lo ngunyaka wobunye, unyaka wesiqalo esisha futhi ngunyaka wemathuba emisebenzi.
"Ngakho kulo mhlangano besizobingelelana nje sibuzane nempilo bese siyakhuthazana ukuthi sisebenze ngokuzikhandla ukuletha ubumbano nokuthi umphakathi uphinde usethembe," esho.
The agenda of the #ANCcaucus meeting. ANC president Cyril Ramaphosa is due to address ANC MPs. #caucus @TeamNews24 pic.twitter.com/95GpV03DJ7
— Paul Herman (@PaulHermanCPT) February 8, 2018